Mooge/HIBF - Maalinta Kowaad - Arbaca 22 Julaay 2009
Maalinta Kowaad - Arbaca 22 Julaay 2009
Bilawga Barnaamijka: Hage Maxamed Y. Colaad – Ambassador Hotel – Waqtiga: 09:00
Furitaanka: Aayado qur’aan ah ka dib, waxa lasoo bandhigi doonaa fikirkii uu ku yimi bandhiggu, ereyga qabanqaabiyeyaasha. Waxa xigi doona ereyga iba furka Bandhig Dhaqaneedka Mooge (BDHM) oo Maxmed Ibraahim Warsame “Hadraawi” uu ku gardaadin doono. Cabdirisaaq Waaberi Rooble, wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska, ayaa barnaamijka si rasmi ah u furaya.
Riwaayad kooban oo uu allifay Cabdiraxman Yuusuf Carten oo la magac baxaday Baqayo Roged.
Dood ku saabsan arrimaha la xidhiidha faafreebka ama cabudhinta ay ka qaybqaadanayaan abwaannada Hadraawi, Gaarriye, Banfas, Saciid Gacmudi waxana dooddaas lagu lafagurayaa arrimaha la xidhiidha faafreebka iyo waaya-aragnimadii kala duwanayd ee ay shakhsiyadahaasi la soo kulmeen xilliyadii kala duwanaa iyo siyaabihii ay ula kala macaamileen xaladahaas soo waajahay.
Waxa tusaale loo soo qaadan doonaa qayb ka mid ah xadhiggii dhallinyaradii UFO iyadoo halkaas lagu akhriyi doono qaybo ka mid ah buugga A note on My Teacher’s Group: news report of an injustice, Jaamac Muuse Jaamac, oo ay akhriyi doonto Farduus Siciid Dirir. Waxa dooddaas goob joog ka ahaan doona qaar ka mid ah kooxdii UFO sida Maxamed Baaruud, Axmed M Madar, Dr. Adan Yusuf Abokor oo ka jawaabi doona su’aalaha la waydoiiyo.
Waxaa barnaamijkan soo afjaraya kamankoodii Boqorka Cuudka Xudaydi iyo Faysal Cumar Mushteeg iyo waayo waayo! Waxa martisharaf innoo ahaan doona abwaannada iyo fanlayda Faadum Cabdillaahi Maandeeq, Saxardiid Maxamed Jabiye, Ismaaciil Cabdi Basbaas, Saynab X Cali Baxsan, Maxamed Maxamuud Dheeg, Tiriig Xaashi.
Dhacdada Labaad: Hage Maxamed Baashe X Xasan– Guriga Shaqaalaha Waqtiga 16:00 -18:00
Maalintan oo loo hibeeyay Halyay naftiisa u huray ummaddan gobannimadeeda, waxa la iska xogwareysanayaa shaqsiyaddii Maxamed Mooge Liibaan; kalintiisii macallinimo, halgan, mulaxannimo, hal abuurnimo, faneed iyo riyooyinkiisii halganka. Waxa ka qaybgalaya: Boobe Yuusuf Ducaale, Maxamed Fadal, Cabdi Nuur Allaale, Cabdiraxman Isman Caalin, Hadraawi, Deerwaa, Maxamed-Rashiid Sheekh, Shanuuf Brothers, Cabdikariin Axmed Mooge, Maxamed Raambo. Waxa la soo bandhigayaa muuqaallo, heeso, miyuusig iyo xogwarran.
Dhacdada saddexaad: Gabayo iyo majaajillo, Waqtiga: 19:30-21:30
Waa fursad ay dhallinta suugaanlayda ahi kusoo bandhigi dooonaan hal-abuurkooda. Waa gabayo ay ku ladhanyihiin muuqaallo, majaajillooyin iyo heeso ay soo bandhigayaan Maxamed Bulshaawi (Burco), Cabdirasaaq Maxamed Muuse (UoH), Maxamed Salebaan Cumar (UoH), Maxamed Aadam Muxumed (UoH), Cabdirashiid Cabdilahi Caynaan (Camuud), Xasan Jama Magan, Freshman (Camuud). Waxa lagusoo bandhigi doonaa majaajillada la yidhaado “qof aqoontii hadlaaya ku qabooji ma fiicna” oo ay jilayaan Sooraan iyo Samaale.
Gebagabada barnaamijkan waxaa heeso xul ah kusoo afjari doona fanaanka caanka ah ee Lafoole.